Lawyer U Than Tin on Aperthoid Law in Karen District by Bigot Monk and Rakhine Riots | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Dateline Irrawaddy on protest and rejection of OIC by Buddhist Monks and some people
MM.Net Videos »
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ “နိုင်ငံတ်ာအစိုးရ စင်ပြိုင်ထောင်ခြင်း” ဖြစ်တယ်လို့
ရှေ့နေကွန်ယက်မှ ဦးသန်းတင်က ပြောကြား
ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာတော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှာက်ရေး (ကရင်ပြည်နယ်)က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြား လှုံ့ ဆော်မှုကြေငြာချက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ပာာ “နိုင်ငံတ်ာအစိုးရ စင်ပြိုင်ထောင်ခြင်း” ဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေကွန်ယက်မှ ဦးသန်းတင်ကပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါကြေငြာချက်ကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ် ကိုလည်း မီဒီယာစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ အရေးယူပေးဖို့ ပုဂိုလ်ခြောက်ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုး တိုင်ကြားလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လှုံဆော်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ် ၊ လူမျိုးရေးကို အဓိကရုဏ်း ပုံစံမျိုးလှုံဆော်သလို ဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီသတင်းကို တာဝန်ရှိသူတွေထံ အကြောင်းကြားတာပါ ဟု တိုင်းကြားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလှကြည်က တိုင်ကြားရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါတယ်။
Tags: Bhikkhu, Burma, Muslim, Organisation of Islamic Cooperation, Rakhine State, Rohingya people, Sittwe, Yangon
This entry was posted on October 20, 2012 at 11:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.